Lomano – Vive l’Avenir 2016 : mpilomano miisa 317 indray nifaninana | NewsMada
Lomano – Vive l’Avenir 2016 : mpilomano miisa 317 indray nifaninana
Nafotaka ny fifaninanana. Mpilomano 317 tamin’ireo 322 nisoratra anarana no indray nifaninana tetsy amin’ny dobo filomanosana Olympika Ampefiloha tamin’ny hetsika « Vive l’Avenir 2016 », ny faran’ny herinandro teo. Fifaninanana nokarakaraina ary fanaon’ny klioba Saint-Michel isan-taona, eo ambany fiahian’ny federasiona malagasy (FMN).
Samy nampiseho ny tanjany sy ny fahaiza-manaony avokoa ireo mpilomano avy amin’ireo ligim-paritra efatra misy eto Madagasikara eo amin’ny taranja lomano. Araka izany, saika tazana nifaninana tamin’izany avokoa ireo mpilomano kalaza.
Niady ny fifaninanana ary niraradraraka ny « meilleures performances » vitan’ireo atleta. Teo ihany koa ny famonoana ny « records » na zava-bita tsara indrindra. Nomontsanin-dRabetsara Fils Estellah mantsy ny zava-bitany teo amin’ny 50 m dos. Raha 32’’33 no namitany io taranjam-pifaninanana io ny taona 2015, nomontsaniny tamin’ny 32’’28 izany tamin’ity “Vive l’Avenir 2016” ity.
Ankoatra izay, nambaran’ny mpikarakara fa tratra ny tanjona tamin’ity indray mitoraka ity ary tazana fa niakatra ny haavo teknikan’ireo mpilomano. Marihina mantsy fa toy ny fifaninanam-pirenena mihitsy ary efa tafapetraka ny « Vive l’Avenir ».
Tanjon’ny mpikarakara ny hisarihana hatrany ireo ankizy hitia fanatanjahantena ary hiroboka amin’ny taranja lomano. Eo ihany koa ny hitazonana ireo mpilomano efa ao anatiny tsy hijanona fa hanohy hatrany ary mba tsy hivily lalana.